Shiinaha DDI (Dimeryl Diisocyanate) warshad iyo soosaarayaasha | YANXA
Budada Birta iyo Alloyed Powder
Alaabta ： Dimeryl diisocyanate（DDI 1410） CAS Maya .： 68239-06-5
Caanaha 'Molecular formula' C36H66N2O2 EINECS ： 269-419-6
Ka-taxaddarrada Wax-qabashada iyo Kaydinta: KU DIIWAAN QAABKA SI AAD AH SI AAD LEH U XIRAN YAHAY MARKA AAD ISTICMAALO. DUKAANKA KU YIMAADA GOOBTA
Dimeryl diisocyanate (DDI) waa aliphatic gaar ah (dimer fatty acid diisocyanate) diisocyanate oo loo adeegsan karo iskudhafyada ay kujiraan haydarojiin firfircoon si loogu diyaariyo culeysyo miisaankoodu hooseeyo ama polymer gaar ah.
DDI waa silsilad dheer oo silsilad ah oo leh silsilad weyn oo ah asiidh dufan leh oo leh atomyo 36 kaarboon ah. Qaab-dhismeedkan laf-dhabarta ah wuxuu siinayaa DDI dabacsanaan sare, iska caabbinta biyaha iyo sun ku saraysa kuwa kale ee loo yaqaan 'aliphatic isocyanates'
DDI waa dareeraha dareeraha hooseeya ee si fudud u milmi kara inta badan dareerayaasha 'polar or nonpolar solvents'.
Waxyaabaha ka soo baxa Isocyanate,%
koloriin koronto ku jirta,%
1) dhammaan xogta farsamada kor lagu muujiyey waa tixraac.
2) faahfaahin kale ayaa lagu soo dhaweynayaa wadahadal dheeri ah.
DDI waxaa loo isticmaali karaa mashiinka gantaalaha adag, dhammeynta dharka, warqadda, maqaarka iyo waxyaabaha celiya, daaweynta qoryaha lagu ilaaliyo, dheriga korantada iyo diyaarinta astaamaha gaarka ah ee polyurethane (urea) elastomers, xabag iyo shaabad, iwm.
DDI waxay leedahay astaamo sumoobo hooseeya, huruud lahayn, ku milma inta badan dareeraha dabiiciga, biyo xasaasi ah iyo dan yar.
Warshadaha Dharka, DDI waxay muujineysaa rajo codsi aad u fiican oo ku saabsan sifooyinka biyaha celiya iyo u jilcinta dharka. Waa ka xasaasi yar yahay biyaha marka loo eego isocyanates-ka udgoon waxaana loo isticmaali karaa in lagu diyaariyo emulsions aqueous deggan. DDI waxay hagaajin kartaa saameynta biyo-celiyaha iyo saliida-celisa ee dharka fluorinated. Markii loo isticmaalo isku dhafan, DDI waxay si weyn kor ugu qaadi kartaa sifooyinka biyaha celiya iyo kuwa saliida celiya ee dharka.
DDI, oo laga diyaariyey aashitada dufanka yar, waa nooc cagaaran, nooc isocyanate-cusboonaysiin kara. Marka loo barbardhigo isocyanate-ka caalamiga ah ee TDI, MDI, HDI iyo IPDI, DDI waa mid aan sun lahayn oo aan kicinin.
Qabashada: Iska jir taabashada biyaha. Hubi hawo fiican goobta shaqada.
Kaydinta: Ku kaydso weel si adag loo xiray, qabow oo qalalan.
Macluumaadka gaadiidka: looma xakamaynin sida wax khatar ah.
Xiga: Daawada Sodium Perchlorate
Amooniyam Oxalate Monohydrate
Wejiga Amooniyam Nitrate
YANXA (HK) CAALAMIGA Warshadaha CO., LTD.